NICKEL (II) MGBE DIBENZOYLMETHANE NA N-BENZYLETHYLENEDIAMINE, NA SHIFF MONOBASE ha
site na nchịkwa na 21-10-14
N-Benzylethylenediamine na dibenzoylmethane (1,3-diphenyl-1,3-propanedione) condense na stoichiometric ruru 1: 1 site na mmeghachi omume ozugbo na-enye monopase Schiff kwekọrọ; agbanyeghị, mmeghachi omume a na -ewere ọnọdụ na mkpụrụ dị ukwuu naanị n'okpuru ọnọdụ akọwapụtara nke ọma n'ihi obere mmeghachi omume nke ...
A na -eme ka mkpụrụ ihe ọkụkụ na nhọrọ nke ọma pụta ìhè site na ịza pentose 1 ruo 10 pasent 0.05 ruo 0.2 mmiri mmiri acid nkịtị n'ime ihe nrụpụta plọg na -arụ ọrụ na ọnọdụ okpomọkụ n'etiti 220 Celsius ...
Oge obibi mmeghachi omume dị mkpụmkpụ yana dị n'etiti 0,5 na 100 sekọnd. Enwere ike rụọ ọrụ nrụpụta ihe nrụpụta ihe nkwụnye nkwụnye ọkụ dị elu a pụrụ iche na nhazi ọ bụla iji weghachite ngwaahịa furfural. Nhazi abụọ masịrị bụ otu usoro, pentose recycle operation nke furfural bụ r ...
Keto-enol Tautomerism nke Dibenzoylmethane na Media ahaziri ahazi
Keto-enol Tautomerism nke Dibenzoylmethane na Media Jiang, Yun-Bao ~* Ye, Nong (Ngalaba Chemistry, Mahadum Xiamen, Xiamen, 361005) keto-enol tautomerism nke dibenzoylmethane (DBM) na mgbasa ozi ahaziri ahazi, dịka β-cyclodextrin na micelles (ionic na non-ionic), ultr na-enyocha ya ...
Mmetụta nchedo nke dibenzoylmethane megide N, N-dimethylformamide na-ebute nnukwu hepatotoxicity na ụmụ oke.
site na nchịkwa na 21-04-15
AIM Iji tulee ohere nke dibenzoylmethane (DBM) na mgbochi na ọgwụgwọ N, N-dimethylformamide (DMF) toxicosis.METHODS A na-etinye ụdị nnwale anụmanụ nke ọrịa ịba ọcha n'anya nke DMF butere iji nyochaa mmetụta mgbochi na ọgwụgwọ n'otu n'otu. Na nnwale mgbochi, ...
Ogige Chemical Furfural
site na nchịkwa na 20-08-15
Ngwakọta kemịkalụ Furfural (C4H3O-CHO), nke a na-akpọkwa 2-furaldehyde, onye ama ama nke ezinụlọ furan na isi mmalite furans ndị ọzọ dị mkpa. Ọ bụ mmiri na -enweghị agba (ebe esi esi 161.7 ° C; ike ndọda kpọmkwem 1.1598) ...
Kedu ihe bụ Furfural?
site na nchịkwa na 20-08-13
Kedu ihe bụ Furfural? KC BRUNING Furfural bụ kemịkal sitere na ihe ọkụkụ nke a na -emepụta maka ebumnuche ụlọ ọrụ. Ihe mejupụtara ya bụ ihe ndị na -emepụta ihe ubi dị ka oat husks, bran, corncobs, na sawdust. Ụfọdụ p ...
Eriri Osisi Bagasse
site na nchịkwa na 20-08-12
Melanoma na -adịghị ahụkebe bụ naanị 4% nke ọrịa kansa niile mana ọ so na ọrịa neoplasms na -egbu egbu. Dacarbazine bụ ọgwụ ịhọrọ maka ọgwụgwọ melanoma na Brazil site na sistemụ ahụike ọha ọkachasị n'ihi ọnụ ala ya. Agbanyeghị, ọ bụ alkyl ...